तुलाधर र तिहार | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / तुलाधर र तिहार
तुलाधर र तिहार
Posted by: युगबोध in विचार November 7, 2018	0 149 Views
(१) ०७५ सालको तिहार (यमपञ्चक) को पूर्वसन्ध्यामै लो कतान्त्रिक वामपन्थ आन्दो लनका शिखर व्यक्तित्व पद्मरत्न तुलाधरले आखा चिम्ले कहिल्यै नखो ल्ने गरी । हे र्न मन लागे न उनलाई, बाघको छालामा स्यालको रजाइ ।
लो कतान्त्रिक गणतन्त्रका अघो षित र स्वघो षित रजौ टाहरुको बलमिच्याइ । समग्र अधिकार प्राप्तिको आन्दो लनका अग्रज र अटल आस् थाका धरो हरको अन्त्य भयो  । उनी जीवित छउञ्जे ल धारे हात लगाएर सत्तो सराप गनेर् हरुले पनि श्रद्धाञ्जलीका शब्द समर्पित गदैर् छन् । दिवङ्गत आत्माको चिरशान्तिको कामना गदैर् छन् । पुष्पगुच्छा र माला लगाइदिएको पनि दे खियो  । अन्तिम लगानी हो तिनीहरुको  । अब पद्मरत्न तुलाधरको विरो ध र समर्थनमा कन्दनी कस् नुपनेर् छै न । तथापि बाचुञ्जे ल धारे हात लगाउने ले मृत्युपश्चात् मो ह दे खाउने र सास रहुञ्जे ल आश गरे र प्रशंसा गनेर् ले दे हावसानपछि सराप्ने को अभाव पनि छै न । अजब ने पालको गजब काइदा भने को यही हो  । बा“चुञ्जे ल अपमान, मृत्युपश्चात् सम्मान † जीवित रहुञ्जे ल श्रद्धा नगरे र दिवङ्गत भइसके पछि श्राद्ध गनेर् , तर्पण दिने र पिण्ड पु¥याउने † हिन्दूकरणको प्रभावमा परे को बुद्ध धर्ममा पनि उस् तै हुने त हो ला नि !
इमान्दार, सज्जन र सदाचारको जमाना है न, छै न । समय आएर र कालले पछ्याएर दे हत्याग गर्न बाध्य भएकाहरुले बरु दुःखै लुकाए भन्नपनेर् दिन आएजस् तो छ । उर्लदो पू“जीवादको यो हाटबजारमा दे ह र दिमाग बे च्न नसक्ने ले जति दिन बाच्छन् उति दुःख पाउनुपर्छ ।
सुख पाउनका लागि दे ह र दिमागको मो लतो लमा सामे ल हुनुपर्छ । लिलामका लागि डाक बढाबढ हुन्छ चो क चौ राहामा । बो लकबो लको रकम लिएर दे ह र दिमाग बे चे पछि हाइसुक्ख । भौ तिक र वै चारिक बलात्कारमा रमाउन जान्ने ले मो ज गर्न पाउछन्, सक्छन् । विरो ध गनेर् हरु बदनाम हुन्छन् । आखिर तिनको पनि दाउ र भाउ त हुन्छ, चल्छ भित्रभित्रै , तर दे खिदै न बाहिर । मो ल र मनमिले स् वीकार, नमिले बलात्कार त हो नि ! विचार र आस् थामा, संस् था र संरचनामा पनि । पद्मरत्न तुलाधरले पनि कम आरो प खे पे नन् । मानवीय समवे दनाले संवे दित हुदा मञ्चमै आसु चुहाउथे , उदारखालका विद्रो ही थिए, त्यसै ले आदर र आरो प दुबै पाए । पाउदा पाउदै अस्ताए । उदाउदै नन् अब । उनका नाममा भाषण गनेर् , पर्चा छनेर् र संगठन खो ल्ने , ट्रष्ट बनाउने र दिवस वा जयन्ती मनाउने , स्मारिका निकाल्ने जस्ता अने क काममा तिनै अघि लाग्लान्, जसले आजीवन दुःख दिएका थिए र पाइलै पिच्छे उनका बाटामा अवरो ध सिर्जना गर्दथे  । अने क दाउपे च लगाएर, अकल्पनीय दुर्घटना गराएर, दाजुलाई परलो क पु¥याएर, यो लो कमा भाउजु सुसानेर् र दिवङ्गत दाजुका नाममा दिनको तीनचो टि आरती उतानेर् कै फलिफाप हुन्छ । राजनीतिमा छलनीति र कपटनीति नभए, नपत्याउदा दुर्घटना नगरे , षड्यन्त्र नगरिए, नियमसंगतढंगले खुरुखुरु चले , चलाए, चचैर् हु“दै न, मजै आउदै न नि !
(२) दशै ं गए लगत्तै तिहार पनि आयो  । एकै महिनामा दुबै महान पर्व (चाड) परे  । चाखको भन्दा पनि बाध्यता छ मनाउन । धान्न सक्ने का लागि त के ही छै न, है न । नसक्ने का लागि भने यस्ता चाडवाड आउ“दा पनि भाग्नुपनेर् स् िथति तयार हु“दै छ । खर्च पु¥याउनै गाह्रो  । आम्दानीका उद्यमभन्दा खर्च गनेर् बाटा धे रै भए । फजुल फुर्मासमा अस् वस् थ प्रतिस् पर्धा भो  । द्यौ सी र भै लो खे ले र समाजको यस् तो कालो मै लो पखाल्ने काम हो स्, भा“डभै लो मच्चाउने काम पटक्कै नहो स् । जुवा र जा“ड नामका समाजका गलगा“डको अन्त्य हो स् । पटका पड्काउने , भुइ“चम्पा र झिर्झिरी जलाउने नाममा आगो नलागो स्, मन र वनमा । प्रकाश पर्वले कसै लाई नजलाओ स् । उज्यालो दे ओ स् । घरकी लक्ष्मीलाई पीडा दिएर मूर्तिकी लक्ष्मीका पाउमा लम्पसार पनेर् हरु बढे का छन् । नवरात्रमा दुर्गाका झा“की जति झकिझकाउ थिए, उति त छै नन्, तर पछिपछि लाग्ने को धुइरो छ । मूर्तिकी दुर्गालाई जीवित दुर्गाले दे ख्न र पुज्न नदिने , छे क्ने हरु पनि रहे छन् अझै  । नवरात्रका बे ला महिलाले पनि दुर्गापूजामा सहभागी हुन पाउनुपर्छ भने र आवाज उठ्यो  । ती महिलाहरुको स् तुत्य आवाजप्रति ऐ क्यबद्धता जनाउ“दै , मूर्तिकी मात्रै है न, मान्छे लक्ष्मीको पनि आदर र सम्मान गरियो स् ।
धन्वन्तरी दिवस प¥यो काग तिहारका दिन, धनतिरस भनिन्छ तराई÷मधे शतिर । त्यो दिन के ही न के ही किन्नै पनेर् चलन छ । सुन, चा“दी र तामाका सामग्री किने राम्रो हुने भनिन्छ । आयुवेर् दिक उपचार विधिका प्रवर्तक धन्वन्तरीको स् मरणमा कर्मकाण्डी कार्यक्रम भए । लक्ष्मीपूजाका दिन महाकवि लक्ष्मीप्रसाद दे वको टाका नाममा पनि गरिन्छन् । पुरे त र जजमानको अभाव छै न । अभाव त उपलब्धिमूलक काम र कर्मवीरको मात्र हो  । हावामा मुक्का हान्ने र हल्लाखल्ला गनेर् मान्छे त जति पनि भए ।
पौ राणिककालको सूचना संवाहक भनिन्छ, मानिन्छ काग । बिहानै काग कराएको आवाज सुने पछि सिन्का भा“चे र, औ ंला नापे र, गणना गरे र अर्थ लगाउने हरु र तदनुसार गनेर् हरु कम छन् अचे ल । छै नन् भने पनि हुन्छ । पशु, पंक्षीका आवाज जान्ने बुझ्ने हरुले प्राकृतिक विपत्तीबाट जो गाउन सक्थे  । ज्ञान विज्ञान र यन्त्रको जति विकास भए पनि प्राकृतिक प्रको पको पूर्वसूचना पशु पंक्षीले भन्दा पहिले पाउन सके को छै न मान्छे ले अझै  । सुनामी आउ“दा कुकुर सुरक्षित हुने र मान्छे मनेर् कारण पनि त्यही हो  । कुकुरलाई रक्षकका रुपमा हे रिन्छ । गाईलाई साक्षात् लक्ष्मीका रुपमा लिइन्छ, पुजिन्छ । गो वर्धन पूजामा गो रु, हलो र हलीको महिमा गाइन्छ । समाज विकासका क्रममा कृषि कार्यका लागि पशुपालनको आवश्यकता प¥यो  । संरक्षणको उपाय अपनाइयो  । खाद्यान्न आपूर्तिले शिकार खे ले र जीवन धान्नपनेर् बाध्यता ट¥यो  । तत्कालीन आवश्यकताका लागि गरिएका यी क्रियाकलाप मौ जुद छन् अद्यापि । आधुनिक उपकरणले आवश्यता पूरा गर्न थाले पछि गाई गो रु पाल्ने भएनन् । छाडा बनाइदा खे तीपातीका लागि तिनै पशुहरु बाधक बने , सडकजाम पानेर् काम गरे का छन् र दुर्घटनाका कारक बने का छन् अचे ल । यसपालिको तिहारमा अरु के ही नभए पनि गौ शालाको व्यवस् थाका लागि पहल भए, गाई गो रुको व्यापारलाई सहज पार्न दबाब दिए राम्रै हुन्थ्यो  ।
राजनीतिक अस् िथरतामा सांस् कृतिक अराजकता पनि मौ लाएको थियो विगतमा । यसपालिको दशै ं र तिहारमा बिग्रे को त्यो बाटो र पाटो सपानेर् प्रयासको थालनी गरे को अनुभूति हु“दै छ । सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि भाइटीकाका लागि चाहिने मर–मसला, फूल माला र सप्तरङ्गी टीका, फलको आयात घटाउनुपनेर् आवाज जो डदाररुपमा उठे का छन् । चाडपर्वलाई खर्चिलो र भद्दा नबनाउ, सक्ने गरी मनाउ, अशक्तलाई सघाउ“, आत्मीयता बढाउ“, भन्ने सन्दे श प्रवाह भइरहे का छन् । राम्रो हो यो  । प्लाष्टिकका फूलका माला, विषादी हाले र टल्काएका फल, शरीरमा रो ग फै लाउने रङ, हानीकारक भएको र त्यसले दुस् प्रभाव पारे को कुरा बुझ्दै गएका छन् सबै ले  । आफ्नै है सियत र गच्छे अनुसार मनाउन थाल्दा बित्तिकै बो झ हुन्नन् चाडपर्वहरु पनि । नहो स् अबदे खि ।
(३) तीज, दशै ं र तिहारलाई अलि भड्किलो बनाउदा बदनामी बढे पछि सुधानेर् प्रयास चले को छ स“गस“गै  । नवकुलीनहरुको तडक्भडक्लाई पचाएन समाजले र बचाएन तिनीहरुको नक्कली ठाटबाठ । हराउदै गएको लज्जामा समाजको दुत्कार र तिरस् कारस“गै शरमको पालुवा पलाउ“दै छ । सकारात्मक संके त हो यो  ।
(४) कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछिको हत्या र अपराधी खो जबिनमा दे खिएको उदासिनताले सरकारका सकारात्मक काममाथि कालो पो तिएको छ । नारायणमान बिजुक्छे ले त ‘अपराधीलाई कारवाही गरे यो सरकार ढल्छ’सम्म भने  । राज्य र शक्तिशाली सरकार कमजो र भयो , असफल दे खियो  । यति धे रै बहुमतप्राप्त र सामथ्र्यवान सरकारले सिण्डिके टसग समर्पण ग¥यो  । ठग ठे के दारसग पनि साठगाठ गरे को भे टियो  । हरे क अपराध र अपराधीको सम्बन्ध सत्ता (सरकार) सग रहे को भन्ने परे को छ जनमानसमा ।
यस्तै बे लामा पद्मरत्न तुलाधर पनि परमधाम भए । निःस् वार्थ सहयो ग र मध्यस् थता गनेर् मान्छे को अभाव छ । डा. दे वे न्द्रराज पाण्डे , कृष्ण पहाडी र दमननाथ ढुंगानाजस् ता अग्रज नागरिक अभियन्ता पनि सरकारी कामकाजप्रति सन्तुष्ट दे खिन्नन् । लो कतन्त्र, वामपन्थ, मानवअधिकार, सामाजिक असन्तुलन र सन्तुलनका दूरगामी असरलाई ख्याल गरे र बुझ्ने र बुझाउने मान्छे को अभाव भयो  । अपूरणीय क्षति भयो  । तिहारलाई पनि खल्लो बनायो  ।
Previous: दाङमा सिमेन्ट उद्योगः जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव
Next: तिहारको शुभकामना